रोकिएन पल शाहको म्युजिक भिडियो रिलिज हुने क्रम ! « Ramailo छ
रोकिएन पल शाहको म्युजिक भिडियो रिलिज हुने क्रम !
नायक पल शाह अभिनित फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ फागुन ३० गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । पल र पूजा शर्मा अभिनित फिल्मको प्रोमो समेत सार्वजनिक भैसकेको छ । तर पल अभिनित म्युजिक भिडियोपनि दिनहुँ जस्तो सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
गत साता पल शाह नाचेको ‘धरोधर्म बिद्यानास’ बोलको लोक गीत सार्वजनिक भएको थियो । यो लगत्तै उनी फिचर्ड नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । अञ्जु पन्त र बसन्त थापा मगरको स्वर रहेको ‘कहिले दायाँ कहिले बायाँ’ को भिडियोमा पललाई नग्मा श्रेष्ठ र शोभित बस्नेतले साथ दिएका छन् । भिडियो यस्तो बनेको छ :
उसो त पल शाह म्युजिक भिडियो हुँदै फिल्ममा प्रवेश गरेका हुन् । तर फिल्म रिलिजको मुखमा दिनहुँ जसो भिडियो आउँदा दर्शक झुक्किने त होइनन् ?